Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Boeing ga -arụpụta ụdị drone ọhụrụ na Australia
Airlines • Airport • Akụkọ na -agbasa Australia • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Loyal Wingman bụ ụgbọ elu ọgụ ndị agha mbụ emere na arụpụta ya na Australia n'ime ọkara narị afọ. Boeing Australia na -emepụta ụgbọ elu isii ugbu a na mmekorita ya na Royal Australian Air Force.
Boeing kpughere atụmatụ ịrụ ụdị ụgbọ elu agha ụgbọ elu na -enweghị ụgbọelu na Australia.
Boeing ọhụrụ agha drone na -eji ọgụgụ isi arụ ọrụ na tandem ụgbọ elu mmadụ.
Boeing ahọrọla Toowoomba obodo dị na Queensland ka ọ bụrụ ebe mgbakọ ikpeazụ maka ụgbọ elu Loyal Wingman na -achịghị.
Nnukwu ụgbọelu mba Amerịka Boeing ekwupụtala na ọ na -eme atụmatụ ịrụ ụgbọ elu ya Loyal Wingman ọhụrụ na -enweghị onye ọrụ n'Australia.
Dị ka Boeing si kwuo, ọ họrọla obodo Toowoomba na steeti Queensland dị ka ebe mgbakọ ikpeazụ maka ụdị ụgbọ elu ndị agha drone ọhụrụ ya. Flightgbọ elu ule mbụ ahụ emechara na mbido afọ a.
Nkwuputa a na -abịa otu izu ka United States, United Kingdom na Australia kwupụtara ọkwa njikọ nchekwa ọhụrụ nke ga-enye Australia ụgbọ mmiri okpuru mmiri nuklia. China katọrọ nkwekọrịta a ma bulie esemokwu na mpaghara Indo-Pacific.
Dabere na Boeing Agbachitere Australia, mmepe nke ụgbọ elu ọhụrụ a na -aga dịka atụmatụ siri dị. UAV ọhụrụ na -eji ọgụgụ isi arụ ọrụ ka ya na ụgbọ elu mmadụ wee tụọ ime, chepụta ma mepụta na Australia.
Ọ bụ ụgbọ elu ọgụ ndị agha mbụ ka emebere ma rụpụta ya na Australia n'ime ọkara narị afọ. Boeing Australia na -emepụta ụgbọ elu isii ugbu a na mmekorita ya na Royal Australian Air Force.
Enwebeghị iwu akwadoro, kwuru Boeing, mana gọọmentị Australia yiri ka ọ nwere ntụkwasị obi na obi ụtọ maka ike Loyal Wingman.
A ga -ewu ụgbọ elu ọhụrụ n'ime ụlọ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Wellcamp, nke Wagner Corporation nwere.
Onye isi oche Wagner John Wagner kwuru na ya nwere olile anya na nchekwa na mpaghara ikuku n'ọdụ ụgbọ elu ga -adọta ọtụtụ ụlọ ọrụ na mpaghara ndị yiri ya.
A na -atụ anya na ọrụ a ga -emepụta ọrụ 300 n'oge a na -ewu ihe owuwu ahụ na ọnọdụ 70 na -arụ ọrụ na mmepụta.
Onye isi ala steeti Queensland Annastacia Palaszczuk kwuru na nkwupụta ahụ bụ "akụkọ dị egwu" ma na -anọchite anya oge mbụ Boeing hiwere ebe ụdị a na mpụga North America.
Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt ebidola usoro oge oyi ọhụrụ:...
Mmachibido njem Omicron ọhụrụ na-eyi njem ụgbọ elu egwu ...